Marquage au sol Ambatobe – Ampandrianomby-Ampasampito
Ho fandrindrana ny fifamezivezen’ny mpandeha an-tongotra sy ireo fiara eto Antananarivo Renivohitra dia notanterahina nanomboka ny faran’ny volana Mey ka hatramin’ity volana jiona ity ny « marquage au sol » iandraiketan’ny Sampan-draharaha misahana ny fitaterana sy ny fifamezivezena eto Andrenivohitra na DTMU (Direction des Transport et de la Mobilité Urbaine ) eo anivon’ny fiadidina ny tanànan’Antananarivo.
Teny Ambatobe no nanombohana ny asa, vokatry ny fiaraha-miasa amin’ny Lycée Français. Nasiana « passage piéton » ho fiarovana ny mpianatra tsy afaka mandeha amin’ny trottoir intsony nohon’ny fisian’ireo fiara miantsona eny amin’ny sisin’ny arabe, ary nisy ihany koa ny fametrahana « plot » ary « panneau de signalisation » mba ahafahan’ireo mpianatra miampita ny arabe. Ho an’ny teny Ampandrianomby kosa dia sady nasiana « passage piéton » no nasiana « limitateur de vitesse » mba ahafahan’ireo fiara mandeha mora.
Ny « marquage au sol » teny Ampasampito kosa indray dia nohon’ny fisian’ny tetik’asa fanamboarana ny tetezana eny Antsakaviro izay misy rano miakatra matetika. Izy ity dia vokatry ny fiaraha- miasan’ny Kaominina amin’ny PIAA (Programme Intégré d’Assainissement d’Antananarivo) sy ny AFD (Agence Française de Développement) ary ho tanterahina ny volana Jolay sy Aogositra. Hisy araka izany ny fandaminana ny lalan’ireo fiara miainga eo amin’ny Route circulaire – Besarety – Avaradoha ary Mahazo, hanjary lalana ahafahan’ny fifamezivezen’ny fiara 2 araka izany ny lalana eny Amasampito. Ho tohin’izay asa rehetra izay dia hiara- hientana ny Boriboritany fahadimy, ny Polisy Monisipaly ary ny DTMU.
Araka izany dia manentana ireo mpivarotra mba hanaiky ny fandaminana tanterahin’ny Kaominina. Izao hetsika rehetra izao dia ho fanatanterahana ny vinan-dRtoa Ben’ny tanàna amin’ny fandrindrana sy famerenana ny trottoir ho an’ny mpandeha an-tongotra ary ny arabe ho an’ny fiara.